🪑 Suuqyada qadiimiga ah & suuqyada xamashka | Booqo Hultsfred
Gudaha ka orod!
Waqti ku qaado gorgortanka suuqa boodada. Deegaanka caqli badan, raqiis ah oo ka sareeya madadaalo oo dhan! Naqshadeeya naqshadaha ama waxyaabo duurjoogta-duurjoogta ah - boog maxalli ah oo hel luul cusub oo gacan labaad ah.
Suuqa dhogorta libaaxyada
Ku soo dhowow suuqa bakhaarada libaaxyada '900 m² dukaanka gacanta labaad. Laba dabaq oo leh alaab guri iyo dabaq dhan oo ay ku jiraan alaabooyin yaryar.
Greenhouse waa dukaan gacan labaad oo cajaa'ib leh oo leh alaabooyin badan oo la bixiyo, waa wax aad la yaabban tahay inaad booqan karto degelkeenna. Ku soo dhowow aqalka dhirta lagu koriyo!
Farxad suuqa tag
Suuqa Lyckans flea wuxuu kuu hayaa alaab gacan labaad oo madadaalo ah oo aadan ka daali doonin. Halkan waxaad ka heli doontaa wax walba qiimo wanaagsan.
Kupan wuxuu kugu soo dhaweynayaa tukaankooda gacanta labaad ee cajiibka ah.
Ku soo dhowow suuqa boodada Linus, dukaan gacan labaad oo cajaa'ib leh oo ay ka buuxaan alaab gacan labaad.
Ku soo dhowow Virserums Möbellager oo ah suuq dhoor ah oo dhan 900 m². Laba dabaq oo leh alaab guri iyo dabaq dhan oo ay ku jiraan alaabooyin yaryar.
Mörlunda Loppis waxyar ayuu ka fog yahay kaniisada Mörlunda wuxuuna qariyaa bakhaaro ay ka buuxaan waxyaabo badan. Waa kuwan weelasha, alaabta guriga, waxyaalaha qadiimiga ah, buugaagta
Kusoo dhawow JT Antikt ee Hultsfred oo ku taal norra orskarsgatan.
Talaabooyinka gacanta labaad
Gorgortanka Stegen ee gacanta labaad ee Hultsfred! Waxay iibisaa maacuunta guriga, alaabta guriga, waxyaalaha qadiimiga ah, buugaag iyo waxyaabo kale oo badan.
Hanne's Boutique ee Virserum waa dukaanka qurxinta guriga. Qurxinta guriga, alaabta guriga, qadiimiga qadiimiga ah iyo kuwa cusub.
Kaniisada Ekeberg gacanteeda labaad iyo suuqa boodada
Iibinta maacuunta guriga, alaabta guriga, dharka, buugaagta iyo qadiimiga. Faallooyinka